Photo Source : Electrical Engine
प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग र स्किल नेपालको प्राविधिक सहयोगमा रोजगारीमूलक तालिम खुलेको छ । १६ देखि २४ वर्षसम्मका विविध कारणले विस्थापित, घरेलु हिंसाबाट पीडित, द्वन्द पीडित, सुधार गृहबाट फर्केका, एकल महिला, किशोर र किशोरीलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । आवेदनको अन्तिम मिति २०७५ जेठ १३ गतेसम्म रहेको छ । जेठ १४ गते अन्तरवार्ता र १६ गतेबाट तालिम सुरु हुने भनिएको छ । यस्तै प्रकारको तालिम आषाढ, श्रावण, भाद्र र आश्विनमा पनि सञ्चालन हुने सूचित गरिएको छ ।
स्किल नेपालको कार्यालय
टुटेपानी, सातदोबाटो, ललितपुर
कर्मचारीलाई तालिममा पठाउने कि नपठाउने ? यसरी गर्नुहोस्...
आफ्ना कर्मचारीलाई तालिममा पठाउँदा केही समयका लागि...
नि:शुल्क ब्युटिसियन तालिमको अवसर!!!
सीटीईभीटी and (Event) बाट सीप परीक्षणको अवसरसहित...